Maxamed C. Guuleed, Gudd. Guddiga xisaabxirka baarlamaanka Puntland oo bogaadiyey kororka dhaqaale & hannaanka miisaaniyadeed ee Puntland. – Radio Daljir
Maxamed C. Guuleed, Gudd. Guddiga xisaabxirka baarlamaanka Puntland oo bogaadiyey kororka dhaqaale & hannaanka miisaaniyadeed ee Puntland.
Garowe, July 28 – Md. Guuleed oo aan ka waraysanay miisaaniyada & xisaabxirka dawlada Puntland ee 2009-2010 ayaa sheegay in 30.5% dakhliga dawladu uu ku baxay hay’adaha dawliga ah, 26.5% ay ku baxday amniga & ciidamada, halka 43.6% uu ku baxay mashaariicda horumarineed & kharashaadka guud ee Puntland. Md. Guuleed ayaa soo dhaweeyey hannaanka dhaqaale iyo xisaabeed ee dawlada Puntland marka is-barbardhig loo sameeyo sanadihii hore iyo gobolada kale ee Somaliya.